November 2007 ~ မာန်လှိုင်းငယ်
11:03 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အဖွားမာ (လူထုဒေါ်အမာ)(၉၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အခမ်းအနား ကဗျာရွက်ဆိုပွဲ ပြုလုပ်
(၂၉ . ၁၁ . ၂၀၀၇)ရက်နေ့ ညနေ (၆း၃၀)နာရီခွဲမှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
2:02 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
(အဖွားမာရဲ့ (၉၂)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုခြင်း)
ကျနော် စာတော ကဗျာတောထဲ
မရဲတရဲ တိုးဝင်စမှာ ...
အဖွားမာရဲ့စာပေကို နှစ်ခြိုက်စွာ ဖတ်ရတယ်။
အဖွားမာရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှု စကားတွေကို
မြတ်မြတ်နိုးနိုး ရင်ထဲမှာ ထာဝစဉ် သိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။
အဖွားမာ မြင်လိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီရတဲ့အထိတော့
ရင်အုပ်မကွာ ထွေးပိုက်ရင်း ရပ်တည်ပေးသွားပါဦး ... အဖွားမာ။
ပြည်သူတွေရဲ့ တောက်ခေါက်သံတွေ လမ်းမတွေပေါ် လှိုင်းထန်ခဲ့ရတယ်။
သံဃာ့သွေး၊ ခွပ်ဒေါင်းသွေးတွေရဲ့ သစ္စာတရားဟာ
စောင့်ကြည့်ပေးသွားပါဦး ... အဖွားမာ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက်။
1:59 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဆရာတော်တပါးက ပေးပို့လာတဲ့ ကဗျာပါ။ ကျနော့် ဘလော့ဂ်မှာ တင်ချင်တာနဲ့ ပြန်လည်တင်ထားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာရဟန်းရှင်လူတို့ အားတက်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
11:33 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တခါ တခါ အသိရခက်
သားကို ဘာမှ မပြော။
တခါ တခါ အသိရလွယ်
သားကို ချိုသာစွာ ပြော။
တောင် အထပ်ထပ်တောင် တုန်လှုပ်။
သား ဦးချကန်တော့ ဂုဏ်ပြုရင်း
ကျောက်ထက် မှတ်တိုင် လွှင့်ထူးထားတယ်။ ။
3:48 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
ဆေးပေါင်းခတဲ့ညအကြောင်း ကိုရွာသား က ရေးပြီးတော့ ကျနော့်ဆီကို TAG ဆိုတဲ့ ဆေးပေါင်းခည ငနဲလေးကို ခေါ်လာသဗျ။ ကိုရွာသား မခေါ်လာခင် အရင် TAG ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်တို့က ပြောတဲ့ စကား ငနဲကြီးလေးကို နှင်းဆီနီနီ က ကျနော့်အိမ်ကို အရောက်ပို့ပေးထားသေးတယ်ဗျာ။
ကျနော် မအားလို့ မရေးဖြစ်သေးတာပါ။ ဒီအကြွေးတွေကိ မဆပ်ရသေးတဲ့အချိန်မှာပဲ နောက်ထပ် TAG ဆိုတဲ့ ချစ်သူတို့ အိပ်ဖွင့်ပေးစာ ငတိလေးက ၀င်ရောက်လာပြန်တယ်ဗျာ။ သူ့ကို ခေါ်လာသူကတော့ နှင်းမိုးဝေ ပါ။ ကျနော့်ကို အကို မဲပါတယ်တဲ့ လာကြည့်ပါဦးဆိုလို့ သွားကြည့်လိုက်တာ နံပါတ်လေး ချိတ်နေတယ်ဗျာ။
ကဲ ... အကြွေး သုံးခုကိုတော့ ဆပ်ရတော့မှာပေါ့။ ဒါနဲ့ ဘယ်ဟာကို အရင် ဆပ်မလဲဆိုတာ စဉ်းစားလိုက်တော့ ဆေးပေါင်းခတဲ့ ညအကြောင်းကို အရင် ဆပ်မယ်လို့ ပေါ်လာတယ်။ ဒါကြောင့် ဆေးပေါင်းခတဲ့ ည အကြောင်းကို ချရေးလိုမယ် ... ကိုရွာသား ရေ ... ရေးပြီဗျာ။
ကျနော် ဆေးပေါင်းခတဲ့ ညကို မဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့တာ လေးနှစ်တောင် ကျော်နေပြီ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် သတိတောင် မရတော့လောက်အောင်ကို မေ့နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဖြတ်သန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ဆေးပေါင်းခတဲ့ ည အမှတ်တရလေးတွေကို ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့လိုက်ပြီ။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ညကို ရောက်တာနဲ့ အရင်ဆုံးဘာလုပ်တယ်လို့ ထင်လဲ။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက်။ သူငယ်ချင်းဆိုလို့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေပါ။ ကျနော်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လပြည့်နေ့ညမှာ ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြတယ်။ ဘယ်မှာစုဆုံမယ်ဆိုတာလည်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြ တယ်။ ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် စုဆုံတဲ့ နေရာက တောင်ကုန်းပေါ်က ဘုန်းကြီးကျောင်း အောက် တောင်ခြေသူငယ်ချင်းတယောက်အိမ်မှာ စုဆုံဖြစ်ကြတယ်။ ဒီလိုစုဆုံကြတာနဲ့ သူငယ်ချင်း တွေ မီးဖိုတယ်ဗျာ။ မီးပုံကို အလယ်မှာထားပြီး ၀ိုင်းကြီးပတ် “၀” လုံး ပုံစံထိုင်ကြတယ်။ ဂီတာက လေးလက်။ ဘာဂျာက တခု။ လက်ခုပ် (လက်နှစ်ဖက်)က အများကြီးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေက မများပါ ဘူး။ ရှစ်ယောက်ပါပဲ။
လပြည့်ညမှာ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ဂီတာတီးပြီး သီချင်းဝိုင်းဆိုကြတယ်။ ဒီကြားထဲ အရက်ကလေး (သေရည်)ပါ ပါလိုက်သေးတယ်ဗျာ။ သေရည်ပါတော့ ကျနော်တို့အတွက် အမြည်းက လိုနေပြီး ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်း တယောက် စလိုက်တယ်။
“ငါတို့ တွန့်တိုတတ်တဲ့ အိမ်က ကြက်သွားခိုးကြမယ်။ ဘယ်လိုလဲ”
ထောက်ခံတဲ့လူက ခုနှစ်ယောက်။ မထောက်ခံတဲ့ လူက တယောက် (အဲဒါ ကျနော်)ပါ။
“လပြည့်ညမှာ သူများကြက်သွားခိုးတာ မကောင်းဘူး”လို့ ဆိုလိုက်တော့ ၀ိုင်းသမကြတယ်ဗျာ။
ပြောလိုက်တဲ့ စကားတွေကို နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
“မင်းက ဘာအခုမှ သူတော်ကောင်းလာလုပ်နေလဲ”တဲ့
“မင်းက ကြောက်လို့လား ... ငရဲက ကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူး”တဲ့
“မင်း ကြောက်ရင်နေခဲ့ ... ငါတို့တော့ သွားခိုးမယ် .. ရလာလို့ရှိရင် မင်း လာစားရဲ လာစားကြည့်”တဲ့ဗျာ
ကဲ ကျနော်က ဘာပြန်ပြောမလဲ။ အကုန်လုံးက တယောက်တခွန်းဝိုင်းပြောကြပြီလေ။ ကျနော်လည်း အများနဲ့ တယောက်ဆိုတော့ အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။ မဲများတဲ့ ဘက်ကို လိုက်ရစမြဲပဲလေ။ သူတို့ ပြောတာလည်း မခံချင်းဘူး။ ဒါနဲ့ လိုက်လုပ်ရောဆိုပါတော့။
အင်း ... ကျနော့် ကောင်တွေတော့ တော်တော် တော်တယ်ဗျ။ ကြက်ကိုခိုးတာ အသံတောင် မထွက်ဘူး။ ကြက်မအော်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။ ခိုးနည်းလေး ပြောပြမယ်။ တယောက်က ကြက်ခြေထောက်ကို ကိုင်တယ်။ နောက်တယောက် ကြက်ကိုယ်လုံးကို ကိုင်တယ်။ ကျန်တဲ့ တယောက်က ကြက်ခေါင်း (နှုတ်သီး)ကို ကိုင်ပြီး သုံးယောက်ပေါင်း ဖမ်းပြီး ခိုးပြေးကြတယ်ဗျာ။ ကျနော့်မှာဖြင့် စိုးရိမ်ရတယ်။ သိသွားရင် မလွယ်ဘူးပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ကြက်သားစားရ တော့တယ်ဗျာ။ ကြက်သားကို ကျနော်တို့ ချက်စားတာ မဟုတ်ဘူး။ ကြက်ကောင်လုံးကို ကင်စားကြတာ။ ကောင်းတယ်နော်။ အရသာက သိပ်ရှိကြတယ်။ ကျနော် အဲဒီတုန်းက အရက် မသောက်တတ်သေးပါဘူး။ စိတ်က စမ်းချင်တာနဲ့ လိုက်သောက်တာ တခွက်နဲ့ကို ချာလပတ်ကို လည် တယ်ဗျာ။ ကြက်သားကင်စားလိုက် အရက်သောက်လိုက်။ ဂီတာလေး တီး။ သီချင်းလေး ဆိုလိုက်ကြနဲ့ ပျော်စရာညလေး တညပါပဲ။
ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ ကောင်းကင်က ကြယ်တွေ။ လကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်တဲ့လူက ယဉ်။ ရည်းစားကို လွမ်းတဲ့ လူက လွမ်းပေါ့။ အားလုံး အဲဒီလို ရှိနေချိန်မှာ ကျနော်တို့ထဲမှာ အကောင်အသေး ဆုံး (အကောင်အသေးဆုံးဆိုလို့ ကိုယ်လုံးကို ပြောတာနော်) က သူ့ရည်းစားဆီ သွားချင်တယ်လို့ ထအော်တယ်။ အားလုံး အတွေးတွေက ပျက်ကုန်လို့ ၀ိုင်းအော်ဆဲကြသေးတယ် ဒီကောင့်ကိုပေါ့ဗျာ။ ကျနော်တို့ ဒီကောင့်ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်လေ။ ဒီကောင့်ကောင်မလေးနဲ့ မတွေ့ခင် ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေ မယ်ဇလီဆီချက်ချက်စားတဲ့ အိမ်မှာ လိုက်စားကြသေးတယ်ဗျာ။ အရသာ ရှိလားမရှိလားတော့ မသိဘူး။ အရက်က ၀င်နေတာကိုး။ စားကြ။ ပြောကြပေါ့။ ဒါနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ချီတာက်ပါပြီး။ ဟိုကောင့် ချစ်သူကောင်မလေးဆီကိုပေါ့။ ကျနော်တို့ နေတာက ရပ်ကွက်အလိုက်နဲ့ဆို တော့ ဘေးချင်းကပ်ရပ် ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းကောင်းမလေးအိမ်ကို ချီတက်သွားကြ တာပါ။
ရောက်ပါပြီး။ သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဆီကို ....
1:21 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
“ကဗျာဆရာ နှင့် ကဗျာ စီးချင်းထိုးပွဲ”
ကဗျာဆရာ နှင့် ကဗျာ စီးချင်းထိုးပွဲမှာ ...
ကဗျာကို အလှဲထိုးဖို့ တာစူနေတယ်။
ဟိုခုန် ဒီပေါက် ပြေးလေပြီ။
ညက လကို လိုက်ဖမ်းသလို
ကဗျာဆရာက ကဗျာကို လိုက်ဖမ်းနေတယ်။
လက ညကို ပုန်းရှောင်သလို
ကဗျာက ကဗျာဆရာကို ပုန်းရှောင်နေတယ်။
ကဗျာဆရာ နှင့် ကဗျာ
ကဗျာ နှင့် ကဗျာဆရာ
ကဗျာ ရစ်သမ်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆို
ကဗျာဆရာ နှလုံးသားက ဘယ်လိုဘာလဲ ... ။
ကဗျာဆရာ နှင့် ကဗျာ စီးချင်းထိုးပွဲမှာ ... ။ ။
11:47 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မိခင်နဲ့ သား ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ …. ။ ။
10:18 AM မာန်လှိုင်းငယ်4comments
သက်တောင့်သက်သာ ထိုင်ပြီး လုပ်နေကြတယ်။
သူတို့ ၀မ်းတထွာအတွက် ရှာရင်း
ဒုက္ခ ဆင်းရဲများစွာ ဝေနေရတယ်။
တို့နိုင်ငံ … တို့နိုင်ငံ … ။ ။
10:14 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကူးလူးဆက်ဆံ ပန်းဝတ်ရည်ကို သောက်နေတယ်။
မောဟိုက်နွမ်းလျစွာ တက်လှမ်းနေတယ်။ ။
5:07 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
ဟုတ်တယ် ဂျေရေ။ ဂျေသိချင်တာကို ပြောပြလိုက်ပါပြီနော်။ ကျနော်တို့ အဲဒီလို မိုးမြန်မြန်လင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပြီးတော့ မိုးလည်း လင်းတာနဲ့ ကျနော်တို့ ကလေးတွေအားလုံး လူကြီးတွေကို ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ လူကြီးတွေက အကြောင်းစုံမေးတော့ ကျနော်လည်း ခံရသလောက် ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ လူကြီးတွေ မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သွားပြီး လျှောက်တင်တယ်။ အကြောင်းစုံလည်းပြောပြတယ်။
ဦးဇင်းတွေလည်း သိရော။ “ဒါဟာ ကလေးကို ညတိုင်း လာပြီးတော့ စနောက်နေမှာပဲတဲ့။ အဲဒါဟာ သူကျွတ်လွတ်ချင်လို့ အဲဒီလို အသိလာပေးတာ” တဲ့။ ဦးဇင်းတွေက အဲဒီလို ပြန်ပြောတယ်လေ။ အဲဒီနေ့မှာပဲ နေ့လယ် ဦးဇင်းတွေ ဆွမ်းဖုန်းပြီးတာနဲ့ အချိန်လောက်မှာ နေ့လယ် (၁း၀၀)နာရီကျ စပြီးလိုအပ်တာတွေကို လုပ်ဖို့ သူ့အတွက် အလှူအတန်းလေး လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး လူကြီးတွေက စုပေါင်း အလှူလေး တက်နိုင်သလောက်စီထည့်ဝင်ပြီး အလှူဖြစ်မြောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကျ တယ်။ ကျနော်တို့ ကလေးတွေလည်း နိုင်သလောက် ၀ိုင်းဝန်းကူညီကျတယ်။ နေ့လယ်စွန်းလောက် တရားနာ အမျှဝေပေးပါတယ်။ ရသလောက်နဲ့ အမြန်လုပ်လိုက်ကြတာ စည်ပါတယ်ဗျာ။ ကိုယ့်လူတွေ ချည်းပဲဆိုတော့ တခြားထွေထွေထူးထူး သိပ်လုပ်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အဲဒါ အလှူအတန်းလေးလုပ် ရင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ အမျှဝေပေးပါတယ်။
ကျနော် စိတ်ထဲမှာ မမေ့သေးပါဘူးဗျာ။ ကြားတော့ မကြားရဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော်သိနေတယ်။ သူဟာ ကျောင်းဝန်းနာမှာ လာပြီး တရားလာနာတယ်ထင်တယ်ဗျာ။ ဒါက ကျနော့် အသိမှာ အဲဒီလို ထင်တယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်။ ဦးဇင်းပြောတဲ့စကားလေ။ ညဘက်မှာ မလာတော့ပါဘူး။ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ကလေးတွေလည်း ပျော်ရွှင်သွားကြပါတယ်။ သူ့အတွက်လည်း ၀မ်း သာလိုက်ကြ မပြောပါနဲ့ဗျာ။
ကဲ ဂျေရေ။ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်မယ်ထင်ပါတယ်နော်။
1:17 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
ဆရာမ စင်သီတာမောင်ရဲ့ အေးမြတဲ့ အသံ
12:51 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
မှုတ်လိုက်ထုတ်လိုက် တရားထိုင်နေတဲ့ လူကို
မောဟိုက်နွမ်းလျစွာ စီးဆင်းနေတဲ့ ရေကို
လှုပ်လီလှုပ်လဲ့ လှုပ်ရှားလည်ပတ်နေတဲ့ ပန်ကာကို
ဘ၀ကို မစိန်ခေါ်လိုက်ပါနဲ့ ...။
ဘ၀ကို မကန်ထုတ်လိုက်ပါနဲ့ ...။
ခိုင်မာမှုနဲ့ ယုံကြည်မှုပါပဲ။ ။
1:10 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
အချစ်အကြောင်းကို ရေးပေးပါတဲ့ ... မေပျို က ကျနော့်ကို TAG လုပ်ထားတော့ ကျနော်လည်း စဉ်းစားပြီး ရေးရတော့မှာပေါ့။ အခု ရေးလိုက်ပါပြီး။
အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲတဲ့။ လူတိုင်းက အဓိပ္ပါယ်တွေ ဖွင့်ကြတယ်။ အမျိုးမျိုး၊ အထွေထွေပါပဲ၊ လူတိုင်းက အဓိကထားပြီး ပြောဖြစ်ကြတာက ကြောင်းအရာနှစ်ချက်ထားပြီ ပြောကြတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသားတွေပါပဲ။ ၅၂၈ ဆိုတဲ့ အချစ်နဲ့ ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့ အချစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်လည်း ဒီအကြောင်းတွေအပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး ပြောရမှာပဲ။ ကျနော်တို့ ထိတွေ့နေတာက ဒီနှစ်ချက်ပဲ ရှိတယ်မဟုတ်လား။ ၅၂၈ ဆိုတဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လူအတော်များများ ပြောကြပါတယ်။ ကျနော်လည် ပြန်လည် ပြောချင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဟာ မိဘနဲ့ သားသမီးအချစ်ကို ပြောကြတယ်။ မိဘနဲ့ သားသမီးချစ်တဲ့ အချစ်ဟာ အေးမြတယ်။ ကြည်နူးတယ်။ ကျေနပ်တယ်လို့ လူတွေ အမျိုးမျိုးပြောကြတယ်နော်။ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်လည်း အေးမြပါတယ်။ တခါတလေမှာလဲ ပူလောင်စေတဲ့ အချစ်တွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင်။ ။ သားသမီး အရမ်းဆိုးပေတေနေတာရယ်။ သားသမီးက မိဘကို စိတ်ဒုက္ခပေးတာရယ်။ ဒါမှမဟုတ် မိဘမကောင်းတော့ သားသမီးဒုက္ခဖြစ်ရတာရယ်တွေကြောင့် အဲဒီအချစ်တွေက သားသမီးနဲ့ မိဘကတော့ ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီအချစ်က ပူလောင်စေတယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ အဲဒါက တခုပေါ့။
ဒါပေမယ့် သေချာပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင် မိဘနဲ့ သားသမီးတွေ ချစ်တာဟာ ဖြူစင်တယ်။ သန့်ရှင်းတယ်။ အေးမြတယ်မှန်ပေမယ့် မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ဖြူစင်တဲ့အချစ်ဖြစ်ဖို့ တကယ့်လိုအပ် ချက်က ဘာလဲ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့ သိဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီတကယ့်လိုအပ်ချက်က ကျနော် အမြင်ကို ပြောရမယ်ဆိုရင် ... မိဘနဲ့ သားသမီးကြား နားလည်မှုရှိရမယ်။ ယုယမှုရှိရရင်။ ကြင်နာမှုရှိရ မယ်။ နွေးထွေးမှုရှိရမယ်။ အဲဒါတွေရှိပြီဆိုရင် မိဘနဲ့ သားသမီးကြားမှာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ တကယ့်ကို ဖြူစင်တဲ့ အချစ်။ သန့်ရှင်းတဲ့ အချစ်။ အေးမြတဲ့ အချစ်ကိုရမယ်။ ဒါဟာ ၅၂၈ ဆိုတဲ့ အချစ်။ ချစ်ခြင်း မေတ္တာပါပဲ။ ဒါကတော့ မိဘနဲ့ သားသမီးကြား အချစ်ကို ကျနော် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့်တာပါ။ ဖွင့်ကြည့် တာထက် အမြင်ကို ပြောတာ ပိုမှန်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်းလည်း အဲဒီလို ခံယူထားပါတယ်။ တကယ့်လက်တွေမှာလည်း အဲဒီလို ကျင့်သုံးပါတယ်။
နောက်ထပ် အချစ်ဆိုတဲ့ အရာကို ပြောချင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ သူငယ်ချင်း အချစ်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ နှစ်မျိုးနှစ်စား ပေါ်လာပါသေးတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ငယ်ပေါင်းကြီး ဖော် သူငယ်ချင်း။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တမျိုးကတော့ ကိုယ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ၀ါသနာတူတာပဲဖြစ်ဖြစ်။ လုပ်ရင်းကောင်းရင်း ခင်မင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ခင်မင် ရင်းနှီး လာကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောချင်တာပါ။ ဒီလိုမျိုး ကျနော်ယူဆတာပါ။ သူငယ်ချင်း နှစ်မျိုးပေါ့။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက စပြီးပြောရရင် ... ငယ်သူငယ်ချင်းအချစ်ဟာ ပိုမိုခိုင်မြဲတယ်လို မပြောချင်ပါဘူး။ ငယ်သူငယ်ချင်းအချစ်ဟာလည်း ဖြူစင်တယ်။ အေးမြတယ်။ သန့်ရှင်းတယ်လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေက ဆိုးတူကောင်းဘက်တွေလို့တောင် ပြောကြတယ်။ အကုန်ပြောရရင် သေလည်း အတူတူ။ ရှင်လည်း အတူတူ ဆိုတာတွေထိတောင် ဖြစ်လာတဲ့ တကယ့် အချစ်ပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာလည်း နားလည်မှု။ စာနာမှု။ ဖေးမမှု။ နွေးထွေးမှု။ ကြင်နာမှု။ ခွင့်လွှတ်နိုင်မှု တွေဟာလည်း အဲဒီငယ်သူငယ်ချင်းအချစ်မှာ ရှိနေတာပါပဲ။ ဒါဟာ တကယ့်သံယောဇဉ်အချစ်ဖြစ်ပါပဲ။ သူငါလည်း မိဘနဲ သားသမီးအချစ်လိုပါပဲ။ နောက်ထပ် သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ အချစ်ဆိုတာကို ပြောချင်သေးတယ်။ အဲဒီအချစ်ဟာ ခိုင်မာမှုရှိသလို။ မခိုင်မာမှုလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာလည်း ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲလို့တောင် ပြောလို့လည်းရပါတယ်။ တချို့ သူငယ်ချင်တွေဟာ စွန့်လွှတ်မှု တွေပါတယ်။ အနစ်နာခံမှုတွေပါတယ်။ သတ္တိရှိမှုတွေပါတယ်။ စာနာသနားမှုတွေပါတယ်။ အဲဒီသူငယ်ချင်းအချစ်မှာ။ သူလည်းပဲ ဖြူစင်ပါတယ်။ အေးမြပါတယ်။ နွေးထွေးပါတယ်။ တခါတလေ မှာလည်း တကယ့်ကို ပူလောင်စေတဲ့ အချစ်လည်း ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ဒါကတော့ ငယ်သူငယ်ချင်းနဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတို့ အချစ်တွေကို ကျနော် မြင်တာကို ပြောတာ။ ကိုယ်တိုင်သိတာကိုလည်း ပြောပြတာပါ။
နောက်ဆုံး တပိုင်းကို ပြောရရင်တော့ ကျနော်လည်း သိပ်မပြောပြတက်ပါဘူး။ အဲဒါကတော့ ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့ အချစ်ပါပဲ။ အဲဒီအချစ်ဟာ ကျနော့်ဆီမှာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောပြဖို့ကို မစွမ်းပါဘူး။ နှစ်ယောက်ချင်းတော့သိတယ်။ တခြားလူတွေကို ပြန်ပြီးပြောပြမတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် သိသလောက် မှတ်သလောက်လေး ပြောကြည့်ရမယ်ဆိုရင် .... အဲဒါကိုတော့ ကျနော် ကဗျာအဖြစ်နဲ့ ရေးပြီး ပြောလိုက်ပါမယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့ ဖတ်နေတဲ့ လူတိုင်းက စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့။ ကဗျာကိုတော့ ကျနော် အောက်မှာ ရေးထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ စဉ်းစားကြပါ။ ကျနော် ပြောတာ ဟုတ်ချင်မှလည် ဟုတ်မှာပါ။ အမှန်ကြီးပဲလို့ မသတ်မှတ်လိုက်ကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါ တယ်။
နားလည်ခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ ရှိနေတာပါ။
ရယူပိုင်ဆိုင်ခြင်းတွေ အပြည့်နဲ့ ရှိနေတာပါ။
ကြာရှည်မှုတွေ အပြည့်နဲ့ ရှိနေတာပါ။
ခက်မယောင်နဲ့ လွယ် ဖြစ်နေရပါတယ်။
အသိရလည်း ခက်ဆိုတဲ့ အချစ်ပါပဲ။
အဲဒါကတော့ ၁၅၀၀ ဆိုတဲ့အချစ်ကို ကျနော် ကဗျာဖွဲ့ကြည့်လိုက်တာပါပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကို အထက်မှာ ကျနော် ပြောပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။ ကဲ ... မေပျို ရေ ... ကျနော် အချစ်အကြောင်း ကို အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါပြီး။ ဒီလောက်ဆို ကျေနပ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ တခြားဘယ်သူကို TAG လုပ်မလဲလို့ လိုက်ကြည့်လိုက်တာ တော်တော်များများ ပြောပြီးကုန်ပါပြီး။ ဒါကြောင့် ဘယ်သူကိုမှ ပြန် TAG မလုပ်တော့ပါဘူး။ အားလုံး ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ။
3:49 PM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
“ကမောက်ကမ နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့်”
ငါ့ရဲ့ ကမောက်ကမ နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့်
ဒီလိုနဲ့ .... ။
ကမောက်ကမ ငါ ပေါင်းစပ်လိုက်တော့
မ၀တ၀ ဘ၀ချိန်ခွင်ထဲမှာ အိပ်နေရတယ်။
ငါ့ရဲ့ ကမောက်ကမ နှစ်တွေကို ပြန်ကြည့် ... ။ ။
3:47 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
“ပြတင်းပေါက်နံဘေး စက္ကန့်ခဏလောက် ထိုင်ကြည့်ပါ”
ဆန်ပြာပေးမယ့် အဘွားအို မရှိတော့
ရွှေယုန်ကလေးနဲ့ အဘိုးအို ဆန်ဖွပ်ရင်း ငိုင်တွေနေတာ တွေ့လိမ့်မယ်။
လနဲ့ ညတို စီးချင်းထိုးကြတော့
တိမ်တွေ ငိုနေတာ တွေ့လိမ့်မယ်။
လေနဲ့ သစ်ပင် စကားထာဝှက်တော့
ပိုးမွှားတွေက လက်ခုပ်တီးတာ တွေ့လိမ့်မယ်။
ပန်းချီမမီ၊ စာမပီတဲ့ သဘာဝကို
လမ်းတေလေလို လွှင့်မျောနေတာ တွေ့လိမ့်မယ်။
4:32 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
ကြယ်တွေ ဝေကျ ဘ၀
ကြယ်တွေ ကြွေကျ ဘ၀
ကြယ်တွေ ချွေကျ ဘ၀တွေ ရှိနေသလို ...
မျက်တွင်းဟောက်ပက် အ၀ိစီငရဲလို ဘ၀
လေငိုအောင်လုပ်တဲ့ မီးတောင်လို ဘ၀
ပင်လယ်ဖျက်တဲ့ မုန်တိုင်းလို ဘ၀တွေ ရှိနေသလို ...
မျက်ရည်မရှိတဲ့ ပင်လယ်ပြင်လို ဘ၀
မြေကြီးကို တုန်လှုပ်တဲ့ ခြေထောက်လို ဘ၀
နေမင်းကို ခြောက်ခြားအောင်လုပ်တဲ့ မြို့ပြလို ဘ၀တွေ ရှိသလို ...
မျက်ရည်မိုးတွေနဲ့ ရှင်သန်နေတဲ့ ဘ၀တွေ ရှိနေတယ်။ ။
4:30 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
“ကျနော် နဲ့ သူတို့”
ကရုဏာရှင် မာသာထရီဇာကို တွေ့ခဲ့တယ်။
စစ်တလင်းမှာ လူနာတွေကို ကြည့်ခဲ့တဲ့
မီးအိမ်ရှင် နိုက်တင်ဂေးလ်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။
အမေသီးချင်းနဲ့ မေတ္တာသီချင်း ရေးဖွဲ့စပ်ဆိုခဲ့တဲ့
ဂီတသံရှင် ထူးအိမ်သင်ကို တွေ့ခဲ့တယ်။
ဖန်မီးအိမ်ကဗျာနဲ့ ပြည်သူ့ကဗျာတွေ ရေးဖွဲ့စပ်ဆိုခဲ့တဲ့
ပြည်သူ့ကဗျာရှင် ဦးတင်မိုးကို တွေ့ခဲ့တယ်။
သူတို့တွေရဲ့ မေတ္တာနဲ့ လက်တွေကို
တွေ့ခဲ့တယ် ... ။ ။
3:35 PM မာန်လှိုင်းငယ်4comments
“ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် မယုံရင် လာကြည့်လှည့်”
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော့်ကို TAG လုပ်တဲ့လူက နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။ အခု တပြိုင် နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် ရေးပေးလိုက်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ ယုံတမ်းစကားတဲ့ဗျာ။ ကဲ ရေးပါပြီ။
ကျနော် ငယ်ငယ်က ရိုးမတောင်တန်းကြီးတွေပေါ်။ ရိုးမတောနက်တွေထဲ ကျနော့် ဘိုးဘိုးမုဆိုးတွေနဲ့ လိုက်သွားတယ်။ အမြဲတမ်း သူတို့နောက်ကို လိုက်နေရလို့လား မသိဘူး။ ကျနော်စိတ်က မုဆိုးလို ဖြစ်လာပါရော။ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ အဘိုးမုဆိုးတွေက သင်ပေးတာကိုး။ အတွေ့အကြုံတွေ။ ရိုးမတောတွေ ရဲ့ အကြောင်း။ ကျားမုဆိုးနဲ့ လူမုဆိုးတွေ တွေ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ထပ်ခါ ထပ်ခါ သိဖန်များလာလေ ကျနော် မုဆိုးစိတ်ဝင်လာလေလေဆိုတော့ ဒါကြောာင့် ငယ်ငယ်လေးနဲ့ မုဆိုးရင့်မကြီးလို သွက်သွက်လတ်လတ်။ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်နေတာပါ။
မုဆိုးတယောက်မှာ ရှိသင့် ရှိအပ်တာလေးတွေကို အရင်ပြောပြမယ်ဗျာ။ မုဆိုးတို့မည်သည် ...
၃။ တောတောင်ရေမြေသဘာဝကို နားလည်ကျွမ်းကျင်ရမယ်။
၅။ စိတ်ရှည်နိုင်မှု။ စိတ်အေးအေး တည်ငြိမ်အောင် ထားနိုင်ရမယ်။
၆။ ပစ္စည်းစုံ (တောလိုက်တဲ့အခါ ပါရမယ့် လက်နက်တွေ) ပါရမယ်။
၇။ သတ္တိနဲ့ ဆင်ခြင်ဥာဏ်ရှိရမယ်။
၈။ သားကောင်တွေရဲ့ သဘာဝအခြေအနေကို သိရမယ်။
၉။ စည်းကမ်းတွေကို သိတတ်။ နားလည်ရမယ်။
၁၀။ သေနတ်ပစ်တဲ့အခါ လက်ဖြောင့်ရမယ်။ မှန်ကန်ရမယ်။
စသည် စသည်ဖြင့် ရှိရမှာပေါ့။ ဒီလောက်ဆို လုံလောက်ပါပြီး။ ကျနော် မုဆိုး။ မုဆိုးကျနော် ဘ၀လေးကို ပြောပြပါတော့မယ်။
ကျနော့် ဘိုးဘိုးက ကျနော့်ကို ခေါ်ပြောတယ်။
“လူကလေး... ဘိုးဘိုးတို့ တောလိုက်ထွက်ကြမယ်တဲ့။ အဲဒါ လူကလေး လိုအပ်တာတွေ အကုန်လုပ်ထားပါ”တဲ့။ ကျနော်ကလည်း
“စိတ်ချ ဘိုဘိုးရေ... အခုပဲ သွားလုပ်လိုက်ပါ့မယ်။” စိတ်က မုဆိုးလိုက်ရမယ်ဆိုတော့ ပျော်လိုက်တာများ ဘယ်လိုပြောရမလဲတောင် မသိတော့ဘူး။ အရမ်းအရမ်းကို ပျော်ရွှင်မိတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်တာတွေကို လုပ်ပြီးတာနဲ့ ဘိုးဘိုးဆီ သွားပြီး။
“အားလုံးပြီးပါပြီ၊ ဘိုးဘိုးရေ။ သွားဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ” လို့ ကျနော်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဘိုးဘိုးက နေဦး နေဦး။
“မင်းဦးလေး။ မင်းဘကြီးတွေကို စောင့်ကြတာပေါ့”။
ဒါဆိုလည်း စောင့်ရတာပေါ့။ မကြာပါဘူး။ ဘကြီးတော်တွေ။ ဦးလေးတော်တွေ ရောက်လာပါတယ်။ အားလုံးပေါင်း မများပါဘူး။ ကျနော်နဲ့ ဘိုးဘိုးအပါအ၀င် ငါးယောက်ထဲပါ။
တောထဲကို ၀င်ပါပြီး။ အော် ... မေ့နေလို့ တောထဲ မ၀င်ခင် တောစပ်နားမှာ တောစောင့်နတ်တွေ။ တောင်စောင့်နတ်တွေကို ပူဇော်ကန်တော့ရသေးတယ်ဗျာ။ အဲလို မလုပ်ရင် ဘာသားကောင်မှ မရဘူး လေ။ ဒါကြောင့် မုဆိုးတိုင်း။ မုဆိုးတိုင်း အဲဒီလို ပူဇော်ကန်တော့ပွဲတွေ လုပ်ပြီးတာနဲ့ တောကို ၀င်ရစမြဲ၊ ဒါနဲ့ ကျနော်တို့ ငါးယောက်လည်း ငါးမိနစ်လောက် ပူဇော်တာတွေ။ ကန်တော့တာတွေ လုပ်ကြတယ်။
ပြီးတာနဲ့ ... တောကို ကျနော်တို့ ငါးယောက် စ၀င်ပါတော့တယ်။ တောစ၀င်တာနဲ့ သားကောင်း တကောင်တမြီးမှလဲ မတွေ့ပါဘူး။ ဒါနက် တောနက်ထဲကို ၀င်သထက် ၀င်ကြတယ်။ ကြာလေနက်လေ ကြာလေနက်လေပေါ့ဗျာ။ ဒါနဲ့ ဘိုးဘိုးက
“ဟေ့ အားလုံး ခဏနေကြဦး၊ ငါတို့ ဆက်ဝင်ရင် မလွယ်ဘူး”တဲ့။ ကျနော်ကလည်း
“ဟာ ... ဘိုးဘိုးကလည် ၀င်လာခဲ့မှတော့ ဆက်ဝင်ကြတာပိုကောင်းတယ်”လို့ ပြောလိုက်တော့ ဘိုးဘိုး စိတ်တိုတယ်ဗျ။
“အေး မင်းဝင်ချင်ရင် မင်းဟာမင်း ဆက်ဝင်တဲ့” ကျနော့်ကို အဲလိုပြောတယ်။ ကျနော်ကလည်း ဘယ်ရမလဲ။ စိတ်ကလည်း တိုနေပြီဗျ။ သားကောင်တကောင်မှမတွေ့လို့လေ။ ပြန်စဉ်းစားတယ်။ ကျနော်တို့ကပဲ မှားတာလား။ တောနတ်။ တောင်နတ်တွေကပဲ ကျီစားတာလားတော့ မသိတော့ဘူး။ ထက်ပြီးတော့လည်း မစဉ်စားတော့ဘူး။ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ဟာကို တယောက်ထဲ ဆက်ဝင်လိုက်တယ်။ မိုင်း နှစ်ရာကျော်ကျော်လောက်လည်း ရောက်ရော။ သားကောင်တကောင်ကို တွေ့လို ကျနော်က ပစ်မှတ်ကိုချိန်တယ်။ သားကောင်းကလည်း လည်တယ်ဗျ။ ကျနော် သူ့ကို ပစ်မယ်ဆိုတာ သိလို့မလားမသိဘူး။ ကျနော့်ကို ပြန်ကြည့်တယ်။ အားပါးပါး တခါမှ အဲလို သားကောင် ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးကို မမြင်ဖူးဘူး။ ကျနော်က ချိန်တယ်။ သူက ကြည့်တယ်။ ပြေလည်း မပြေးဘူး။ ဒါနဲ့ ပစ်မှတ်ထဲဝင်တာနဲ့ မောင်းကို ဆွဲလိုက်တာ “ဒိုင်း”ဆို တည့်တည့်ပါပဲ ထိသွားတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ သားကောင်ရဲ့နောက်မှာ ချောက်ရှိနေတာ မသိဘူးဗျ။ သားကောင်ကျသွားမှ သိလိုက်တာ။
ချောက်ကမ်းပါက အောက်ကို မမြင်ရဘူး။ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း တကောင်းထဲရတယ်ဆိုတော့ ဘယ်အလွတ်ခံမလဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ကျနော်လည်း ဘာမှ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ မုဆိုးတို့ သတိနဲ့ပဲ ဆင်းတယ်။ တော်တော်ဆင်းရတယ်။ အောက်ရတော့ ကျသွားတဲ့ သားကောင်ကို မတွေ့ဘူး။ ဘယ်ရောက်လို့ ဘယ်ပျောက်နေလည်း ဆိုတာလည်း မသိဘူး။ တခုတော့ သိလိုက်တယ်။ ကျောတလျှောက် တဖြန်းဖြန်း ကြက်သီးထခဲ့တယ်။
အတွေးပါ တပါတည်း ၀င်လာတော့တယ်။ ငါတော့ တောခြောက်ခံရပြီပေါ့။ ဆက်ရှာလည်း မတွေ့ပဲကို။ ကျနော် အပေါ်ကို ပြန်တတ်ခဲ့တယ်။ ပြန်တတ်တော့ တ၀က်လောက်မှာပဲ ဂူတဂူကို တွေ့တယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဇဝေဇ၀ါဖြစ်သွားတယ်။ ငါ ဆင်းလာတော့ မတွေ့ဘူး။ အခုမှ ဘာဖြစ်လို့ တွေ့တာလဲပေါ့။ တခါ ကြက်သီးထပြန်ပြီ။ စိတ်ကလည်း စူးစမ်းချင်ပြန်ရော။ ကျနော်လည်း အထဲကို ၀င်သွားတယ်။ ၀င် ၀င်ချင်း မှောင်နေတယ်။ မျက်စိကျင့်သားရသွားမှ အထဲကို ဆက်ဝင်တယ်။ ၀င်လေလေ အေးလာ လေလေ။ အထဲရောက်လေ ပိုအေးလေပေါ့ဗျာ။ သတ္တိတော့ အကောင်းသား။ ဆက်ဝင်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားဘူး။ ကျနော့်စိတ်ကို အဲဒီထဲပဲ ၀င်အောင် သွေးဆောင်နေတာကို။
ဟော် ... အလင်းကို တွေ့ပြီ။ ခြေလှမ်းတွေက ပိုသွက်လာတယ်။ ဘယ်ဟုတ်လဲ ... အဲဒီအလင်းက ဘာအလင်းလဲ သိလား။ နေရောင်ခြည်အလင်းမဟုတ်ဘူး။ တကယ့် ရတနာသိုက်က ထွက်လာတဲ့ အလင်းတွေပါ။ အံ့သြသွားလား ... ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်မျက်စိကို ကိုယ်မယုံရဲဘူး။ ပြန်ပွတ်တယ်။ ကိုယ့်အသားကိုယ် ပြန်ထိတော့မှ တကယ်ပါလားပေါ့။
ကဲ ... ကျနော် ဘာဆက်လုပ်သလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြပေတော့ဗျာ။ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင်။ မယုံရင် လာကြည့်လှည့်ပေါ့။ ဟုတ်.. တယ်.. ဟုတ်။
အင်း ဒီလောက်ဆို မေပျို နဲ့ မဆုဝေလည်း ကျေနပ်လောက်ရောပေါ့။ အခု ပြန် tag မယ့် လူတွေကို စဉ်းစားလိုက်တယ်။ တွေ့ပါပြီး။ အောက်မှာပါ ....
တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လိုလဲ ရေးမယ်မဟုတ်လား။
12:26 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
အပေါက်တပေါက်ကို ဆင်ကော်(စူပါကလူး)နဲ့ ကပ်
နက်ဖြန်မှာတော့ ငိုမြည်နေဦးမှာလား။ ။
10:59 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
တိတ်တိတ်ကလေး ဖေဖေ့ကိုလွမ်းစိတ်နဲ့ မျှော်လင့်နေမိတယ် ...
အကြင်နာတွေကို လိုချင်တောင့်တမိတယ် ...
ဆုံဆည်းပါရစေလို့ စိတ်ထဲက ဆုတောင်းမိပေမယ့်
ဆုတောင်းရုံကလွဲပြီး မလွန်ဆန်နိုင်သော ကံတရားကြောင့်
မျှော်လင့်ခြင်းတွေနဲ့ ဖေဖေ့ကို လွမ်းနေဆဲပါပဲ ...
ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ ဖေဖေ့ကိုချစ်နေဆဲပါပဲ ...
ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရဘူး ဖေဖေ ...
အနေဝေးတဲ့ သမီးအတွက်တော့ ဆန္ဒတစ်ခုပဲပေါ့ ...
ဒီနေ့၊ ဒီအချိန်၊ ဒီအရွယ်ထိ
အရှုံးတွေကိုသာ ကံတရားကပေးနေတယ် ...
ဖေဖေ့ကိုလွမ်းလိုက်တာ ဖေဖေရယ် ... ။ ။
Yahoo, Hotmail နှင့် Mail အားလုံးစသည်တို့ကို အသုံးပြုလျက်ရှိသော Internet သုံးစွဲသူများ အထူးသတိပြုရန်၊ Microsoft နှင့် Norton တို့မှ အထူးသတိပေးလာပါတယ်။ လက်တလောဖြစ် ပေါ် လျက်ရှိသော ကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်တမျိုးကို အထူးသတိထားကြရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်သည် မိမိတို့ Mail သို့ 'Life is beautiful' ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၀င်ရောက်လာမှာဖြစ်ပြီး Power Point Presentation လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အဆိုပါ Mail အား ဖွင့်ကြည့်မိပါက ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ အချက်အလက်များအားလုံး ဖျက်ဆီးခိုးယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိ၏ Mail Password ကိုလည် တပါတည်း ခိုးယူသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အထက်ဖော်ပြ ပါ Mail လက်ခံရရှိပါက ချက်ချင်းဖျက်ဆီးပစ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လည်း စိတ်မကူးပါနဲ့ အမြန်ဆုံးဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါက ပိုသေချာပါတယ်။ မိမိနှင့် နီးစပ်ရာ Internet သုံးစွဲသူများ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်း မိမိမှတဆင့် အကြောင်းကြားဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါ တယ်။
2:47 PM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
တို့အားလုံးကို သတိရပါနော်” တဲ့
မင်းတို့ကို ငါသတိရနေမှာပါကွာ ... ။
“ချစ်သော သူငယ်ချင်းရေ ....
ချစ်သော သူငယ်ချင်းရေ .....
မင်းရဲ့ စကားလက်ဆောင်နဲ့တင် ပျှော်ရွှင်နိုင်ပါပြီ
အမြဲတမ်း သတိရနေတယ်ဆိုတာ ယုံပါကွာ ... ။
အောင်မြင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်” တဲ့
ငါ လျှောက်လှမ်း ရုန်းကန်နေတယ်
ငါ ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းနေဆဲပါကွာ ... ။
၂၀၀၇ ခုနှစ် ၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၉)ရက်။
2:37 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
သရဖူဆင်မြန်နိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးပါလား။ ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုင်ဝင်ဘာလ (၉)ရက်။
11:51 AM မာန်လှိုင်းငယ် 1 comment
`အိတ်ထဲမှာ ဒါအကုန်ပဲ ….´
နှင်းသဇင် က သတိပေးလိုက်တယ်ဗျာ။ ဓါးမြတွေက ကျနော်တို့ကိုပါ တိုက်ပါဦးမယ်တဲ့ဗျာ။ အတိုက်လည်း ခံရပါပြီ။ သွေးအေးအေးနဲ့ လာတိုက်နေပါတယ်။ ဓါးမြတွေက သဘော ကောင်းတယ်ထင်ပါ့။ ဖြည်းဖြည်းလုပ်ပါတဲ့နော်။
ရှိတာ အကုန်ထုတ်ဆိုလို့ ထုတ်ပါလို့ ဓါးမြတွေက ပြောတော့လည်း ထုတ်ပါပြီး။ ကြောက်မသွားနဲ့နော်။ သိပ်မရှိဘူးဗျ။
ရော့ … ဒီမှာ …
၁။ ရောင်စုံဘောလ်ပင် ငါးချောင်းနဲ့ ခဲတံနှစ်ချောင်း။ (သူတို့တွေက ကျနော့်အတွက် မိတ်ဆွေကောင်းတွေလေ။ များများမခေါ်ထားဘူး။ ရန်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့)
၂။ အမည်းရောင် စာအုပ်တအုပ်။ (သူကတော့ ကဗျာတွေကို ရေးပြီးသိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်ပါ)
၃။ ဒိုင်ယာရီစာအုပ်တအုပ်။ (တနေ့တာလေးတွ မှတ်သားရအောင်လို့)
၄။ ကဗျာစာအုပ်နှစ်အုပ်။ (မောင်သာနိုးရဲ့ ဘာသာပြန်ကဗျာစာအုပ်တွေလေ)
၅။ ဓါးသေးသေးလေးတစ်လက်။ (ခဲတံကို ချွန်မလို့ပါ။ လိုရမယ်ရ ထည့်ထားတာ)
၆။ လက်ကိုင်ဖုန်း တလုံး။ (လုံခြံရေးအရရော။ အရေးကြီးတဲ့အခါမှာ သုံးဖို့အတွက်ပါ)
၇။ မျက်မှန်တလက်။ (အဝေးရော။ အနီးပါ ကြည့်လို့ရတဲ့ မျက်မှန်။ သူကတော့ အသုံးဝင် တယ်လေ)
၈။ Kingston (USB) တခု။ (သူ့ကို အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ အလွယ်တကူ ထုတ်သုံးလို့ရတယ်)
၉။ အဘိဒန်စာအုပ်တအုပ်။ (သူကတော့ မြန်မာစားလုံးပေါင်းတွေကို ကြည့်တဲ့ စာအုပ်ပါ။)
၁၀။ လက်ပတ်လေးတခု။ (လက်နာတာနဲ့အခါ ပတ်ထားဖို့လေ)
၁၁။ ဦးစိုင်း လိမ်းဆေးတဗူး။ (လက်နာရင် လိမ်းဖို့)
ကဲ … ဘာတွေလိုချင်သေးလဲ။ ရှိတာအကုန်ထုတ်လိုက်ပြီနော်။ ဟေ့… အိတ်ကို တအားမဆွဲနဲ့ဗျ။ ကျနော့် အိတ် ကြိုးပျက်သွားမယ်။ ဒီအိတ်က ကြာပြီး အသစ်မ၀ယ်နိုင်သေးလို့ ဒါလေးကိုပဲ အသုံးပြုနေရတယ်လေဗျာ။ ဟဲ … ဟဲ။
ဒီတခါတော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဓါးမြလုပ်တော့မယ်။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုတော့ ဓါးမြတိုက်သွားပြီ။ အခု ပြန်တိုက်တော့မယ်။ ဟဲ … ဟဲ အဲဒီလူတွေက ဘယ်သူလဲ သိကြလား။
၁။ biggest tu
၃။ မေတ္တာနဲ့ နေမွန်းသင်
ကဲ ဓါးမြတော့ အသိပေးလိုက်ပြီး ကြိုတင် ၀ှက်ထားလို့ရတယ်နော်။ တော်ကြာ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ပေါ်ကုန်မှဖြစ် မကောင်းဘူး။ ဟဲ … ဟဲ။
အင်း နှင်းသဇင်ရေ။ ရှိတာတော့ အကုန်ထုတ်ပြီးသွားပြီနော်။ ဒီလောက်ကျေနပ်မယ်ထင်တယ်။
စာအုပ်ကိုင်တော့ စာဖတ်လို့ မရ
ကဗျာရေးတော့ ဒွိဟအတွေးတွေ ၀င်
စာအုပ်ပိတ် အိပ်မယ်ကြံတော့ မျက်လုံးက ကြောင်
ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ …
ကဲ … … ပြောပါ။
အိတ်တဲ့အခါ မျက်လုံး မှိတ်နိုင်အောင်
ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဒီညမှာ …
ကူပါ … … ကူကြပါ … ။ ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၈)ရက်။
10:08 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မနက်မနက် အိပ်ရာခေါ်နိုးတတ်တဲ့ မေမေ…..
မေမေ့ရဲ့ စကားချိုချိုတွေကို လွမ်းတယ်……..
ကျမရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြ သူရဲကောင်း ဖေဖေ……
ဖေဖေ့ရဲ့ ရင်ခွင်ကျယ်တစ်စုံကို လွမ်းတယ်…….
ညီမလေးတွေရဲ့ မာယာမဲ့အပြုံးလှလှကိုလည်း လွမ်းတယ်……..
ဥယာဉ်မှူးတစ်ယောက်ရဲ့ ဂရုစိုက်ပေးမမှုတွေကိုလည်း လွမ်းတယ် ...
အဝေးရောက် ဒီရင်ခွင်က အရမ်းလွမ်းနေတယ်……..
10:02 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
11:53 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မနှင်းဆီနီနီက စီပုံးပါ အော်သွားတာ တွေ့လို့။ အပြေးအလွှား မနှင်းဆီအိမ်ကို သွားလိုက်တာ။ အော် ကိုယ်ကြောက်တဲ့ သတ္တ၀ါတွေ အကြောင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ကရော ဘာကောင်တွေကို ကြောက်သလဲပေါ့။ အင်း သတ္တ၀ါတော်တော်များများကိုတော့ မကြောက်ပါဘူး။ သူများတွေကိုတော့ လိုက်ခြောက်ဖူးတယ်ဗျ။ ကျနော့် မေမေဆိုရင် မြွေကြောက်တယ်ဗျာ။ နဂိုကတည်းက ရောဂါတခုရှိတယ်။ သွေးတိုးရောဂါပါ။ ကျနော်က အိမ်နောက်ဖေးမှာ စိုက်ခင်းသေးသေးလေး လုပ်နေတုန်း မြွေလာတာတွေ့လို့ ဖမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ မြွေက မကြီးပါဘူး။ အလွန်ဆုံးရှိ ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေစဉ်က ဘုန်းကြီးရိုက်တဲ့ ကြိမ်လုံးခပ်ကြီးကြီးအရွယ်လောက်ပဲ ရှိပါတယ်။ ကျနော်က အဲဒီမြွေကို ဖမ်းပြီး မေမေ့ကို စနောက်ချင်စိတ်ပေါ်လာတာနဲ့ သွားစတယ်ဗျာ။
ကျနော် ဘယ်လို စ တယ်ထင်သလဲ။ “မေမေရေ ... ဒီမှာ ဘာလည်းမသိဘူး။ သား ယူလာပေးမယ်နော်”ဆိုပြီး ယူသွားတယ်။ မေမေ့ ရှေ့ကိုရောက်တာနဲ့ မြွေကို ပြလိုက်တာ မေမေ သွေးလန့်။ သွေးတိုးရောဂါပြန်ထလာပါတော့တယ်ဗျာ။ ကျနော် အဲဒီလိုတွေ့တော နောက်ပိုင်းမှာ မေမေကို မစ တော့ပါဘူး။ မေမေ့ကို သနားတယ်လေ။ (မှတ်ချက်။ ။ ကြာခဲ့ပါပြီး အမှတ်ရတာလေး ကို ရေးလိုက်တာ။ ရေးနေရင်းနဲ့ မေမေ့ကို သတိရလိုက်တာဗျာ။ အခုနေများ မေမေရှိရင် ပျော်စရာကမ္ဘာပါပဲ။ ခုတော့ မေမေက သမလွန်ရောက်ပြီး ကောင်းရာဘုံမှာ စံမြန်းနေရောပေါ့။)
ကဲ ... နောက်တခု ပြောပြဦးမယ်ဗျာ။ ပိုးကောင်သေးသေးလေး မြင်ရင် ကြောက်တတ်တဲ့ လူတွေပါပဲ။ အဲဒီထဲမှာ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ ပါတယ်ဗျာ။ ယောင်္ကျားလေးပါ။ သူက အဲဒီပိုကောင်သေး သေးကို မြင်ရင် ဘယ်တော့ အဲဒီလမ်းက မသွားတော့ဘူး။ တခြားလမ်းက သွားတယ်။ ကျနော်တို့ သူငယ်ချင်းတသိုက် ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတော့ဗျာ။ အဲဒီကောင်ကို စနောက်ချင်တာနဲ့ ပိုကောင် သေးသေးဖြစ်တဲ့ ပင့်ကူသေးတကောင်ရယ်။ ခူယားတကောင်ရယ်။ ပိုးနံကောင်တကောင်ရယ်။ ကျောင်းသွားရင်း လမ်းမှာ ကျနော်တို့က သူ့လွယ်အိတ်ထဲကို ထည့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျောင်းရောက် တော့ စာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာ ဒီကောင်က ထခုန်ဘာလေရောဗျာ။ ကျနော်တို့ကတော့ ရယ်စရာ မြင်ကွင်းကို တွေ့တော့ လက်ခုပ်တီးပြီး ရယ်ကြတယ်။ ဒီမှာတင် ဒီကောင်က ကျနော်တို့ လက်ချက်မှန်း သိသွားတော့ လိုက်ထိုးတယ်ဗျ။ ဘယ်ရမလဲဗျာ။ အပြေးသမားတွေပဲ ပြေးတာ လှည့်တောင် မကြည့်တော့ဘူး။ ပြေးလိုက်ကြတာ။ ဟား .... ဟား ... ဟား ။ ပျော်စရာကြီးဗျ။ (ဒါကတော့ ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတခုကို ပြောပြတာပါ။)
အင်း .... ကိုယ့်အကြောင်းပြောရဦးမယ်ထင်တယ်။ တော် ကြာ လေရှည်တယ်ပြောဦးမယ် ... ဟဲ ဟဲ။
ကဲ ... လာပါပြီးဗျာ။
ကျနော် ကြောက်တာကတော့ အကောင်သုံးမျိုးရှိတယ်။ ၁။ ငန်းမြွေ၊ ၂။ မိကျောင်း၊ ၃။ ငါးမန်း တို့ပါပဲ။ ငန်းမြွေကို ကြောက်ရတဲ့ အကြောင်းလေး ပြောပြမယ်ဗျာ။ ငယ်ငယ်ကဆို ငန်းမြွေအကြောင်း ကြားဖူးတယ်လေ။ သူ့ရဲ့ ဥတွေကို သွားမစားလိုက်နဲ့တဲ့ စားတဲ့လူကို ညဘက်မှာ လာသတ်တာပဲတဲ့ ဗျာ၊ တခါတည်း အသေပေါက်သတ်တာဗျ။ မယုံမရှိနဲ့။ ဟား ... ဟား။ ပြောရင် ယုံမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် ငန်းမြွေဥ မစားဖူးသေးဘူး။ ငန်းမြွေကိုပဲ တွေ့ဘူးသေးတယ်။ လူကြီးတွေ ပြောပြထားလို့ မစားရဲတာပါ။ အဲဒီလိုပြောထားတော့ ကျနော်လည်း အခုချိန်ထိ ငန်းမြွေကို ကြောက်တယ်။
မိကျောင်းအလှည့်ပဲ ... ပြောပြမယ်နော်။ မိကျောင်းကို တွေ့ဖူးတဲ့လူရှိလားမသိဘူးနော်။ ကျနော်ကတော့ ရုပ်ရှင်မှာ တွေ့ဘူးတယ်။ လူသားတွေကို လျှောက်စားနေတာများ။ ကျောပါချမ်းတက် လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ မိကျောင်းကို ကြောက်နေရတယ်။ အဲဒါကြောင့်ထင်တယ်။ ကျနော် တိရိစ္ဆာန်ရုံသွား တော့ မိကျောင်းကို တွေ့တာနဲ့ ဝေးဝေးက ကြည့်တယ်။ အနားအကြည့်ရဲဘူးဗျ။ အနီးကပ်ကြည့်ရင် သူက ပါးစပ်ပြဲကြီးနဲ့ လှည့်ကိုက်မှာစိုးလို့။
ငါးမန်းအလှည့် ရောက်လာပြီနော်။ ကျနော် ငါးမန်းဘယ်လောက်ကြောက်လည်းဆိုတော့ မြစ်တွေမှာ ရေသွားချိုးရင် ဝေးဝေးမကူးရဲဘူး။ ငါးမန်းလာမှာ စိုးလို့။ သံလွင်မြစ်မှာလည်း အတူတူပဲ။ ကျနော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရေသွားချိုရင် ကမ်းစပ်နားလေးမှာပဲ ရေးကူးတယ်။ ရေတော့ ကူးတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဝေးဝေးကူးရင် ဘွားကနဲဆို ငါးမန်းပေါ်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ ဒါကြောင့် ဝေးဝေး မကူးတာ။ ငါးမန်းကို တွေ့ဖူးလားလို့ မေးရင်တော့ ဟဲ .. ဟဲ ကျနော် မတွေ့ဖူးသေးဘူး အပြင်မှာ တွေ့ဖူးရင်တောင် မပြောတတ်ဘူးနော်။ ငါးမန်းကို မကြောက်တော့ပဲနဲ့ လိုက်တောင် ဖမ်းနေရင်တော့ စိတ်မချရဘူးဗျ။ အင်း ... ကျနော် ကြောက်ရတဲ့ သတ္တ၀ါသုံးကောင်အကြောင်းတော့ ပြောပြီးပြီဗျာ။
ကဲ ... ကျနော်လည်း မနှင်းဆီ ပြောတဲ့ လေသံအတိုင်း ထပ်ပြောလိုက်မယ်နော်။ ဒီပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးသူတိုင်း ကြောက်တတ်တဲ့ သတ္တ၀ါကို ရေးကြပေတော့ဗျာ။ အင်း ... ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း လေးယောက်ကိုတော့ TAG လိုက်ဦးမယ်ဗျာ။ အဲဒီလူတွေကတော့ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့် .... ။
၁။ Chaos (ကဗျာချစ်သူ)
၂။ မမေပျို (မိုးပြာရောင် အိမ်မက်များ)
၄။ ကိုဇူလိုင် (July Dream)
9:55 AM မာန်လှိုင်းငယ်3comments
မေမေ့ကို တမ်းတမ်းတတ ရှိလို့ … ။
မုန်တိုင်းတွေလို ကြမ်းတမ်းစွာ မကျ
ညင်သာစွာ စီးကျလာတဲ့ မျက်ရည်မုန်တိုင်းပါ။
အား …… ….
“မျက်ရည်မကျရဘူး …. သားငယ်”လို့
မေမေ့ကို တမ်းတမ်းတတ ရှိလို့ …. ။
၂၀၀ရ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်။
9:51 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကဗျာဆရာတွေက ကဗျာဆန်ဆန် ရေးဖွဲ့ကြတယ်။
စာရေးဆရာတွေက ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ သီကုံးကြတယ်။
ပန်းချီဆရာတွေက ကောက်ကြောင်းများအဖြစ် ခြယ်သကြတယ်။
ငါ … … … ။ ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၇)ရက်။
9:40 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
မနေ့ကနဲ့ ကနေ့ ဘာကွာသလဲ
ယောရှိ်နော တောင်ပေါ်က လေတိုက်တယ်
သံသရာ ကြုံသမျှ ဒုက္ခ
ငါနေတဲ့ ဟေဧဟိ တောင်ပေါ်က
ချယ်ရီတွေ ကြွေလိုက်သမှ တဖွဲဖွဲ
4:42 PM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
11:39 AM မာန်လှိုင်းငယ်2comments
“ဖေဖေ သို့ ….”
အရောက်သွားလိုက်ဦးမယ် ဖေဖေ … ။
အပြောကျယ်တဲ့ သမုဒ္ဒရာကြီးလောက် ဖြစ်ချင်သေးတယ် ဖေဖေ … ။
ပြန်လာခဲ့ပါမယ် ဖေဖေ …. ။ ။
၂၀၀ရ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၆)ရက်။
အ၀ဓိ ကျွန်းဆီက ငှက်သံ
သူဘာတွေးမယ် ဘာမြင်ချင်တယ် ဆိုတာ
ဒါပေမယ့် ဒီဆံပင် ရှည်ကြီးရှုပ်လို့
ငါလည်း မြင်ချင်တာ ရှင်းလင်းပြီသ မမြင်ရ။
ဒီဝဋ္ဋ် ဒုက္ခက ကျွတ်အောင်
နနိဝ ပင်လယ်အော်က ကိုင်းပင်တွေဟာ
အိုဂြီမ က တံငါတွေ
11:04 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ကျနော့်ရဲ့ မွေးမိခင် …. ။
ကျနော့်ရဲ့ မွေးမိခင် …. ။ ။
၂၀၀၇ ခုနှစ်။ နိုဝင်ဘာလ (၆)ရက်။
10:44 AM မာန်လှိုင်းငယ် No comments
ဒီကားနှစ်စီးလုံးက တကယ့်အကောင်းစားကားတေါပါပဲ။ လူတွေကို သက်တောင့်သက်သာနဲ့ ဇိမ်ရှိရှိစီးနိုင်အောင်ပါ။ ကဲ ဒီကားတွေကို ကျနော် ကြော်ငြာထားပါတယ်။ ဘယ်သူ ၀ယ်နိုင်မလဲလို့ မေးကြည့်ပါရစေ။ ကျနော်ကတော့ မ၀ယ်နိုင်ဘူးဗျ။ အလှပဲ ကြည့်နိုင်တယ်။ ၀ယ်နိုင်တဲ့လူရှိရင် ပြောပါ။ ဟဲ ဟဲ ဟဲ။ စိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့။
ဒါကတော့ ကားအထဲက အနေအထားပါ။
ဒါကတော့ နောက်ပုံစံ ကားတစီးလုံးပုံပါ။
ဒီကားတွေရဲ့ ပုံစံတွေက ရှယ်ပဲ။
ဒီကားလဲပဲ လူတွေအတွက် ပုံစံကောင်းလေးတွေပါ။